Archive du 26-oct-2021
Hanonofy hatramin’ny farany
Nanome 3 andro ny tompon’andraikitra hitondrana vahaolana mikasika ny fisondrotry ny vidin’entana eny an-tsena ny filoham-pirenena ny volana aogositra.
Ambohidahy Ankadindramamy Fatin-dehilahy iray hita tao anaty rano
Lehilahy iray hita faty tao anaty rano tetsy Ambohidahy Ankadindramamy omaly vao maraina. Ankizy kely nilalao no nahita sy nahatsiritra izany voalohany, ka nilaza fa misy saribakoly be ao anaty rano.
Fifaninanana Hackathon DevFest 2021 Azon’ny IT University ny laharana voalohany sy faharoa
Azon’ireo mpianatry ny IT University Andoharanofotsy izay oniversite miompana indrindra amin’ny tontolon’ny informatika avokoa ny laharana voalohany sy faharoa tanatin’ny fifaninanana Hackathon DevFest 2021.
JIRAMA Manavao sy manatsara foto-drafitrasa iombonana
Mihaino ny mpanjifa dia miroso avy hatrany amin'ny asa fanavaozana sy fanatsaràna ary fanitarana fantsona ny orinasa JIRAMA toy izay notanterahina teny Ankorondrano Andrefana
Vinan’ny FJKM Mbola firenena Kristianina I Madagasikara amin’ny taona 2118
Vinan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ao anatin’izao synoda lehibe andiany faha 19 tanterahin’izy ireo izao ny hametraka an’I Madagasikara ho mbola firenena Kristianina amin’ny taona 2118
Fikasana hamono ny Filoha Tsy re intsony ny raharaha “Apollo 21”
Nihazakazahana ny fisamborana tetsy sy teroa sy ny fampidobohana am-ponja vonjimaika momba ny raharaha “Apollo 21”, na ilay fikasana hamono ny Filoha,
Fahadiovan’ny tanana Mbola mila entanina sy ampianarina ny olom-pirenena
Ho fanamafisana ny velirano fahadimy napetraky ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina hoe "Fahasalamana ho an'ny rehetra, tsy anavahana sokajin-taona"
Fanampian’i Etazonia Tonga ny vaksiny Janssen 336 000 isa
Nanolotra vaksiny fanampiny hiadiana miisa 336 000 ho an’i Madagasikara hiadiana amin’ny covid-19 i Etazonia, izay mifanandrify indrindra amin’ny vanim-potoana hanokafana ny sisin-tanintsika.
Fiara mijanona eny amoron-dàlana Nanao fanentanana teny Ambohipo ny polisy
Isan'ny singa iray mahatonga ny fitohanan'ny fifamoivoizana na ihany koa mahatonga ny lozam-pifamoivoizana ny fijanonan'ireo fiara eny amoron-dàlana.